Isixeko esikhulu sase-Australia siya kugqitywa kwiiveki ezimbini
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Australia eziQhekezayo » Isixeko esikhulu sase-Australia siya kugqitywa kwiiveki ezimbini
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ngaphezulu kwesigidi sabantu kwindawo yedolophu yaseSydney, kunye needolophu ezikufuphi, babesele bevalelwe ngolwe-Sihlanu, kodwa amagosa athathe isigqibo sokuba amanyathelo anyanzelekileyo ngakumbi ayimfuneko ukubuyisela okwahlukileyo.
Izithintelo ezitsha zeSydney COVID-19 ziya kuqala ukusebenza namhlanje.
Abahlali baseSydney banokushiya ikhaya kuphela benze umsebenzi obalulekileyo, unyango, imfundo okanye ukuya ezivenkileni.
Ukutshixwa kukwasetyenziswa nakwimimandla elijikeleze iSydney.
Abaphathi besixeko saseSydney babhengeze ukuba isixeko siza kuvalelwa ngokupheleleyo kangangeeveki ezimbini. Isibhengezo sokutshixwa kulandela ukwandiswa kwangoko kwamanyathelo e-anti-Covid-19 kwezinye iindawo ukuze kuthintelwe ukuqhambuka kokwahluka okubulalayo kwintsholongwane.
Izithintelo, eziqala ukusebenza namhlanje, zithetha Sydney abahlali banokushiya amakhaya kuphela benze umsebenzi obalulekileyo, unyango, imfundo okanye ukuya ezivenkileni. Abasemagunyeni baphikise ukuba la manyathelo ayafuneka ukunqanda ukusasazeka kwe-Delta eyahlukileyo. Sydney sele erekhodile iimeko ezingama-80 ezinxulunyaniswe noxinzelelo lwe-COVID-19.
"Nangona singafuni ukuthwalisa abanye umthwalo ngaphandle kokuba kunyanzelekile, ngelishwa le yimeko apho kufuneka sitsho," INkulumbuso yaseNew South Wales iNkulumbuso uGladys Berejiklian utshilo.
Ukutshixwa kukwasetyenziswa nakwimimandla elijikeleze iSydney. Umbuso wonke uya kuba nemida kwiindibano zoluntu kwaye ufune iimaski ngaphakathi.
Ngaphezulu kwesigidi sabantu kwindawo yedolophu yedolophu, kunye needolophu ezikufuphi, babesele bevalelwe ngolwe-Sihlanu, kodwa amagosa athathe isigqibo sokuba amanyathelo anyanzelekileyo ngakumbi ayimfuneko ukubuyisela okwahlukileyo.
Izithintelo zokuqala ekujoliswe kuzo zagxekwa ngabanye abaqeqeshi bezempilo, abathi bafuna ukutshixeka ngokupheleleyo kwesixeko. Kwangoko kule veki, uBerejiklian walumkisa ukuba iSydney yayingena “kwisigaba esoyikekayo salo bhubhane” ngenxa yokwanda kokwahluka kweDelta.
I-Australia iye yaqhuba ngcono kunezinye izizwe ezininzi kumlo we-Covid-19, irekhoda iimeko ezingama-30,422 kunye nokufa kwabantu abayi-910 okoko kwaqala ingxaki yezempilo.
Amanyathelo angqongqo eza njengoko amazwe aliqela kwihlabathi eqala ukuphinda abeke amanyathelo e-COVID-19 phakathi kwenkxalabo malunga nokusasazeka kokwahluka kwe-Delta, ethathelwa ingqalelo ngathi iyosulela.